दरबारकी एक्ली ‘रानी’का कारण राजपरिवारको तिहार पनि खल्लो हुने ! | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
काठमाडौं । यसपटकको तिहार पूर्वराजपरिवारका लागि खल्लो हुने भएको छ । देश शोकमा परेको नाममा दशैंको टीका कार्यक्रम गरिएन । तिहारका लागि पूर्वमुमाबडामहारानी रत्नले कुनै कार्यक्रम नगर्न भनेकी छन । ज्ञानेन्द्रका तीन चेलीमध्ये शोभामात्र जीवित छन् । बैंककबाट आइतबार स्वदेश फर्किएका पूर्वराजा सोही दिन आमालाई भेटन नारायणहिटीस्थित महेन्द्र मञ्जिल पुगेका थिए । रत्नको बोली पनि उति प्रष्ट छैन । उनको अवस्थाबारे ज्ञानेन्द्रले सोधे । डाक्टरले हिँडडुल गर्न र भेटघाट घटाउन सुझाव दिएको धाइआमाहरुले सुनाए ।
रत्नको निजी सहयोगी शम्भु अधिकारीले स्वास्थ्यकै गडबडीका कारण रत्नले तिहार नमान्ने भएको सुनाए । ‘सरकारबाट मर्जी भएअनुसार सुशील राजालाई बिन्ती गरिसकेँ’, शम्भुले ज्ञानेन्द्रलाई बताए । सुशील शमशेर रत्नका एकमात्र भाइ हुन् । उनी २०१७ देखि २०२४ सालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिसदको सदस्य सचिव थिए । रत्न ८९ वर्षकी भइन् । उनलाई अन्तिम पटक गत असार २ मा नर्भिकमा भर्ना गरिएको थियो । – जनआस्था साप्ताहिकबाट